Iphupha malunga noGcino Discover Discover Discover Online ▷ ➡️
Inkampu iqondwa ngokubanzi njengendawo ekhethekileyo apho abantu abaliqela behlala okwethutyana, umzekelo iimbacu ezifuna indawo yokuhlala emva kokufuduka kwilizwe lazo.
Njengomgaqo jikelele, yindawo yokuhlala yexeshana, eyilelwe ngokufanelekileyo, ukuze ikwazi ukudityaniswa ngokukhawuleza kwaye idityaniswe. Zingaba ziinkampu zeentente, ezisetyenziselwa ikakhulu iinjongo zeholide, okanye iinkampu zeembacu kunye neenkampu zamajoni ezisekwe ngamaxesha obunzima. Ukongeza, kukho igumbi lokugcina ngokusisigxina, indawo yokugcina izinto kunye nepryry, umzekelo, apho kugcinwa ukutya okutyiwa, irayisi kunye nezinto zobomi obude. Kwigumbi lokugcina eliphangaleleyo, iifolokhwe zihambisa iipallet ezinzima kunye neebhokisi ukusuka ku-A ukuya ku-B.
Kwixesha elidlulileyo, inkampu yomntu ngobusuku babizwa ngokuba yinkampu. Oku kuthetha indawo apho umntu afuna ukulala khona ebusuku. Eli gama lisasetyenziswa nanamhlanje kulwimi lwabazingeli lokuphumla kwezilwanyana zasendle ezahlukeneyo. Ukuphupha kunokufumana iinkampu zeentlobo ezahlukeneyo kwi el mundo kufana nephupha.
1 Uphawu lwephupha «inkampu» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «inkampu» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «inkampu» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «inkampu» - ukutolikwa ngokubanzi
Ukutolikwa ngokuchanekileyo kwephupha kuxhomekeke kakhulu ekusetyenzisweni kwenkampu yokuphupha. Ukuba yintsimi enamajoni, ke lo mfanekiso wephupha uya kuba nawo ezimbi Amaxesha kunye neenkxalabo ezinkulu. Inkampu yentente ibonisa ukuba uninzi eFreundeskreis luya kuhamba. Kwakhona ayibhengezi ikamva elihle labaphuphi, kodwa Iingxaki kunye nobunzima obuya kwenza ubomi bube nzima ngakumbi.
Ukuba inkampu yephupha ingaphandle, iya kuvalwa Utshintsho ngena kubomi bamaphupha. Rhoqo ukuphupha kuba yinto enye. zokuhamba Ukwenza oko kuya kuba lide kwaye kuyadinisa. Enye indlela iguqulela inkampu ekuhleni njengokungakhathali kokuphupha, okungazukukwenzakalisa.
Inkampu ihlala inentsingiselo ekhethekileyo kumaphupha amabhinqa. Ukuba iphupha lisenkampini, kuya kubakho ubunzima ekulungelelaniseni umhla womtshato. Ukuba uhlala kwinkampu yempi, ukhona Umtshato kufutshane kwaye umyeni wexesha elizayo uya kungqina ukuba ulungile. Nangona kunjalo, ukuba umfazi sele etshatile kwaye ephupha ukuba usekampini yejoni, kunokubangela uqhawulo-mtshato okanye ubunzima obukhulu emtshatweni.
Ukuba i-barracks ibonwa njengendawo yokugcina izinto ephupheni, oku kungabhekisa kuqeqesho, kodwa nasekuthambekeni ebomini bokuvuka. Indawo yokugcina iimbumbulu ihlala ibhekisa koovimba abanokusetyenziswa njengephupha.
Uphawu lwephupha «inkampu» - ukutolikwa kwengqondo
Inkampu itolikwa kutoliko lwengqondo ngokwamaphupha njengophawu lweengxaki ezinkulu ebomini bokuvuka. Ukuba iphupha lisentolongweni okanye kwinkampu yeembacu, unako umkhethe ekubeni, apho ukuphupha kufuneka kuhlupheke kwihlabathi eliphaphamayo.
Nangona kunjalo, ukuba yindawo yokuphumla okanye yekhefu, ukutolikwa kwephupha kuya kuba kuhle. Xa uphupha, ungathanda ukubaleka ubulolo kwaye unqwenela ukonwaba kuluntu nemvisiswano.
Uphawu lwephupha «inkampu» - ukutolika kokomoya
Ngokwenkcazo yephupha lokomoya, inkampu ibonisa okwethutyana. yokuhlala ngokomoya kuphuhliso lwamaphupha.